EMUI 9.1, the Intelligent Android OS | HUAWEI Myanmar
EMUI 9.1 က တိုးတက်ကောင်းမွန်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်၊ စနစ်ပိုင်းလျင်မြန်လာအောင် ချိန်ညှိပေးမှုတို့နဲ့အတူ ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရရှိအောင် စွမ်းဆောင်ပေးမှာပါ။
EMUI 9.1 မှာပါတဲ့ Wallpaper အသစ်တွေက အလှတရားတွေကို ရောင်ပြန်ဟပ်ခံစားစေရမှာဖြစ်သလို App Icon တွေကလည်း ပိုပြီး သဘာဝကျလာစေပါတယ်။
အရင်တုန်းက F2FS စနစ်က Memory ပိုင်းကို အချိန်အကြာကြီးအထိ Read နဲ့ Write အပိုင်းတွေ ပိုမိုတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ အခု EROFS က Read Sped ကို 20% လျင်မြန်1 စေသလို၊ System Space ပိုင်းမှာလည်း ပုံ ၁၀၀၀ အထိ ဒါမှမဟုတ် သီချင်းအပုဒ် ၅၀၀ အထိ ပိုမိုထည့်သွင်းလို့ရစေမှာပါ။2 နောက်ပြီး Read-Only မှတ်ဥာဏ်ပိုင်းမှာလည်း Security ပိုင်းပိုမိုတိုးမြှင့်ထားပါသေးတယ်။
GPU Turbo 3.0 အသစ်က အခုဆို နာမည်ကြီါ်ဂိမ်း (၂၅) ခုအထိ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါပြီ။ ဒီအသစ်မှာ ၁၀%3 အထိ ပါဝါစားသက်သာစေသလို အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းနဲ့ ဂိမ်းအတွေ့အကြုံပိုင်းတွေအတွက် ချိန်ညှိပေးမှာပါ။
HUAWEI Vlog မှာ Features အသစ်တွေ၊ Effects အသစ်တွေ ပါဝင်လာပါပြီ။ ဒီအကောင်းဆုံး Tools တွေနဲ့ Editing အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်သလို Click တစ်ချက်နဲ့ Share ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Highlight Video တွေကိုလည်း အလိုအလျောက် Filter အမိုက်စားတွေနဲ့ ဖြတ်တောက်ချိန်ညှိပေးမှာဖြစ်သလို နောက်ထပ် Special Speed Effects တွေ Background Music တွေထပ်မံဖြည့်စွက်နိုင်ဦးမှာပါ။4 ပုံမှန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေက ရုပ်ရှင်တစ်ခုလိုမျိုးခံစားလို့ရပြီပေါ့။
တစ်ခုခု အလျင်အမြန်တိုင်းတာဖို့ လိုအပ်လာတယ်ဆိုရင် AR Meassure4 app ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ HUAWEI TOF ကင်မရာနဲ့ အလျားတွေ၊ ထုထည်တွေ၊ ဧရိယာတွေကို တိတိကျကျတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။ Face Recognition နည်းပညာသုံးပြီးတော့လည်း ခေါင်းကနေခြေအထိ လွယ်လွယ်ကူကူအရပ်တိုင်းတာမှုတွေကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။5
ဖုန်းကနေ ကွန်ပြူတာကိုထိလိုက်ရုံနဲ့ ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေ၊ စာတွေ6 ကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း7 ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ Device တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကြားလည်း HUAWEI Share OneHop နဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ Copy,8 Paste ပြုလုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ နောက်ပြီး ဂိမ်းကစားနေစဉ်မှာလည်း ဖုန်းကိုခါပြီး ကွန်ပြူတာကိုထိလိုက်ရုံနဲ့ စက္ကန့် ၆၀ ကြာ Screen Recording9 ကိုပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
HUAWEI Phone Clone နဲ့ဆို Contact တွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုနဲ့ တခြားအရာတွေကို ဖုန်းအဟောင်းကနေ အသစ်သို့ လွယ်လွယ်ကူကူလျင်လျင်မြန်မြန် ကူးပြောင်းနိုင်ပါတယ်။10
Phone Clone အကြောင်း ပိုမိုလေ့လာရန်
EMUI 9.1 ရရှိမယ့် ဖုန်းမော်ဒယ်တွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်
အသေးစိတ်မေးမြန်းလိုပါက Hotline နံပါတ် 09-689000900 သို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
1. EMUI9.1 Update Push Notification Schedule
EMUI 9.1 update push notification will be made available for (i) Nova 3e on 12 June 2019; and (ii) Mate 20 series on 27 June 2019. EMUI 9.1 update for other Huawei products still pending.
2. Hicare App Method
a) After the EMUI 9.1 update notification is pushed to user, user is required to login to the HiCare App and upgrade the version of it accordingly by selecting “update”.
b) User is required to select the EMUI 9.1 version to perform the update.
c) At the system update page, user is required to click on the beta version. Upon downloading the beta version, the subsequent steps for updates are the same.
The average picture file size is2MB and song file size is4MB. There may beaslight difference in available space for each model.